Global Voices teny Malagasy » Tsidika bilaogy Kenyanina janoary 2006: fampisaintsainana vitsivitsy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Jona 2019 3:51 GMT 1	 · Mpanoratra Juliana Rotich Nandika Naomy
Voalohany indrindra, miara-miory amin'ireo fianakavian'ny Kenyana izay maty noho ny fianjeran'ny tranobe manana rihana enina  tamin'ny alatsinainy teo tany Nairobi. Araka ny nambaran'ny gazety Standard , “olona 10 farafahakeliny no voamarina fa maty. Tamin'ny 11 ora latsaka fahefany alina, 75 farafahakeliny ireo niharam-pahavoazana nesorina tao ambanin'ny korontan-trano rava feno vovoka, tao ny naratra be sy ny naratra kely.” Raha namaky ity lahatsoratra momba ny firodanan'ny tranobe ity i Acolyte , dia nanamarika ny fiafaran’ izany lahatsoratra izany  hoe ” Mampalahelo tokoa. Toa tsy manatsoaka lesona tamin'ny loza voajanahary teo aloha ny olona. Voalahatra ho antsika ve ny hamerina ireny fahadisoana ireny hatrany hatrany?”
“Nandona ny gazety mahazatra”  ny tontolon'ny blaogy afrikana, araka ny fanamarihan'i Kenyan Pundit, ny gazety standard namoaka lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Miasa any ivelany, monina ao an-tanindrazana  momba ny tontolon'ny bilaogy Kenyana.
Nanonona manokana ny lahatsoratra “Manàna mofomamy sy mihinàna izany”  ny lahatsoratry ny Standard, izay nitaoman'i M an'ireo Kenyana ny am-pielezana mba hiverina any Kenya. Niteraka fifanakalozan-kevitra maro ny hafatra ary nampiditra andiam-panadihadihana mahaliana fanafohezan-teny toy ny KT (Kenyan Tourust na Kenyana mpizahatany – miverina hanao fitsidihana ny kenyana am-pielezana) sy KR (Kenyan Roots na fototra kenyana – Kenyanina monina sy miasa amin'ny fomba Kenyana). Niteraka fanontaniana ity fifanakalozan-kevitra ity raha azo heverina ho toy ny fananganana firenena ny vola alefan'ny Kenyana any am-pielezana.Nahatonga adihevitra mafana ny fanehoan-kevitra avy amin'ireo Kenyana/bilaogera am-pielezana.
Nanomboka tamin'ny filazana ny tatitra nataon'ny filoha teo aloha ho fiadiana amin'ny kolikoly any Kenya  ihany koa ity herinandro ity. Niala ny asany efa ho herintaona i John Githongo, nanao fanadihadihana momba ny kolikoly izy, anisan'izany ny fahatafintohinana Anglo Leasing. Manana fomba fijery mazava momba izany i Ntwiga ao amin'ny lahatsoratra ” Bizina araka ny mahazatra ao Nairobi 3.o” . Miditra an-tsehatra ny fiolanolanana ara-tsaina amin'ny lohahevitra famariparitana an'i John Githongo ho ilay nandiso fanantenana , ary nanoritra hoe:
Nandinika izay lazaintsika ho finoana aro-bala  i Afrikan Eye  ary nanontany hoe: “Inona no antony hananana finoana sy fitsipika ary fotokevitra raha tsy misy fiantraikany eo amin'ny fomba fiainantsika izany finoana izany?” Mbola nanampy ihany izy tao amin'io lahatsoratra io hoe” mandra-pamalintsika io fanontaniana io dia mbola hifampitifitifitra isika amin'ny hoe ahoana “ny hinoantsika ny fampandrosoana Afrikana raha hita eny amin'ny zavamisy raha ny sôkôlà nohafarana avy any Belzika no ifandroritana vidiana.
Niteny i Afrofeminista hoe “Avelao ny Kikuyu ho irery” . Anisan'ny foko lehibe indrindra ao Kenya ny Kikuyu, izay matetika mampifanolana ao amin'ny fiainana kenyana ny resa-poko (tahaka ny fanavakavaham-bolonkoditra). Nanamarika izy fa any amin'ny fanjakazakan-dehilahy no tokony ho tena iadiana, fa ao amin'io rafitra io no tena isehoan'ireo hetsika ‘mamerina amin'ny laoniny’, ‘mitaky’ ireo hevitra fanandratana ho ambony indrindra ny foko izatsy na izaroa – fitarihan-dalana ataon'ny mpitarika Kikuyu, Luo na Kalenjin. Noho izany dia manampy ady iray ambonin'ny iray hafa izay efa iadiana isika, ary tena mampalahelo izany.”
Farany fa tsy ny kely indrindra, niresaka ny fomba fijery Afrikana amin'ny famadihana ho vola ny bilaogy  i White African.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/06/17/139530/
 ny fianjeran'ny tranobe manana rihana enina: http://www.eastandard.net/archives/cl/hm_news/news.php?articleid=35404
 ny nambaran'ny gazety Standard: http://www.eastandard.net/hm_news/news.php?articleid=35438
 izany lahatsoratra izany: http://mywordsonly.blogspot.com/2006/01/publcity-for-kbw.html
 “Nandona ny gazety mahazatra”: http://www.kenyanpundit.com/?p=113
 namoaka lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Miasa any ivelany, monina ao an-tanindrazana: http://www.eastandard.net/hm_news/news_s.php?articleid=35328
 “Manàna mofomamy sy mihinàna izany”: http://www.thinkersroom.com/blog/2006/01/having-cake-and-eating-it-2
 tamin'ny filazana ny tatitra nataon'ny filoha teo aloha ho fiadiana amin'ny kolikoly any Kenya: http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/4638728.stm
 ” Bizina araka ny mahazatra ao Nairobi 3.o”: http://ntwiga.net/blog/?p=39
 famariparitana an'i John Githongo ho ilay nandiso fanantenana: http://www.thinkersroom.com/blog/2005/12/awards-2005
 “John Githongo, miarahaba anao aho noho ny maha lehilahy anao, noho ny fanantenana izay nomenao ary ny fanomezana ny herim-ponao.”: http://madkenyanwoman.blogspot.com/2006/01/kenyagate-mysterious-case-of.html
 finoana aro-bala: http://afrikaneye.blogspot.com/2006/01/bullet-proof-beliefs.html
 “Avelao ny Kikuyu ho irery”: http://feministafricansisters.blogspot.com/2006/01/leave-kikuyus-alone.html
 “Namorona ny tahiriny manokana ny Vondrona Eoropeana mba ahafahan'izy ireo manome fanampiana ho an'i Afrika tsy manontany ny hevitry ny Banky Mondialy, izay tarihin'i mpandala nentindrazana vaovao Etazoniana Paul Wolfowitz”.: http://bankelele.blogspot.com/2006/01/airbus-to-kenya-airways.html
 Ary ny tena ratsy dia mbola tsy aloan-dry zareo ny volan'ny artista amin'izany. Inona no ratsy kokoa, ny Kiss FM sa ny jiolahy eny an-dalàna?”: http://sylkwan.blogspot.com/2006/01/kiss-fmsounding-death-knell-for-local.html
 ny fomba fijery Afrikana amin'ny famadihana ho vola ny bilaogy: http://whiteafrican.com/?p=147